विकल्प राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र
संघीय गणतन्त्रले हरेक तह र तप्कालाई आक्रान्त पार्‍यो, जनजीवन नै आक्रोसित छ यतिबेला । नियन्त्रण र सन्तुलनलाई समेत दुई तिहाईको बलमा पेवा बनाउने काम सुरु भएको छ । प्रहरी प्रशासनमा पार्टीगत हस्तक्षेप पुरानै रोग हो, अव न्यायालयमा समेत पार्टीको हैकम ? यस्तै हो भने राजनीतिबाट अलग रहेको सेनामा पनि दुई तिहाईको रोग नपस्ला भन्न सकिन्न, चिन्ता व्यापक बढेको छ । यसरी पनि लोकतन्त्र चल्छ र ? लोकतन्त्रलाई यिनले पार्टीतन्त्र, निरंकूशतन्त्र बनाइदिए । नेकपाकरण भएको तन्त्र कसरी लोकतन्त्र हुनसक्छ र ?
हाँस, कुखुरा, गाई, भैंसीदेखि पानीपुरीसम्म कर लगाएर संघीयताले जग हँसायो । सिंहदरवारका ढोकातिर नांगा जुलुस निकालेरमात्र केही हुनेवाला छैन । दु:खजिलो गरेर बाँच्ने जनतामा जुन करको महामारी थोपरेको छ, सरकारको यस्तो कृयाकलाप रोक्ने हो भने जनताले नै बिकल्प खोज्नुपर्छ । जनतासँग भोट लिएर जनतामाथि बज्रपात गर्नेलाई जनताले नै रोक्ने हो । जनताले निरंकूशता हटाउन दिएको जनादेशको दुरुपयोग गरेर राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र मास्नेहरु यथार्थमा अर्का श्री ३ का अवतारहरु हुन् भन्ने अव जनतालाई प्रष्ट भएको हुनुपर्छ ।
जनताका दैनिक समस्या, देशका सीमाका समस्या, आन्तरिक र बाह्य समस्या सबैतिर यो संघीय गणतन्त्र फेल भइसक्यो । कुनै पनि राजनीतिक नेता राजनेता बन्न सकेनन् । सबै गुटका नेता, पार्टीका नेता, स्वार्थका नेता, विदेशीले उठाएका नेता हुन् । राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्नसक्ने र देशले विश्वास गरेको एकताको सुत्र आजको आवश्यकता हो । जनताले ढिलो नगरुन्, राजसंस्था गुहार्न, राजसंस्थाका प्रतिनिधिले पनि ढिला नगरुन्– देशप्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न । जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा बाँडिएको र चुनावका बेलादेखि सरकार गठन भएसम्म नेताले बाँडेका सपनाहरु चकनाचूर भइसके । धर्मसंसकृति सिध्याउनेदेखि मुलुकको नामोनिशान मेटाउने काम यी नेता भन्न रुचाउनेले गरिरहो छन् । यिनको संघीयता चलाउन जनताले पेट काटेर, च्यातिएको त्रिपालमुनी बसेर कर तिरिदिनुपर्ने ? जनतको थाप्लोमा वैदेशिक ऋणको भार थप्नुपर्ने, यो त लोकतन्त्रकै अपमान हुनगएको छ ।
लोकतन्त्र लोकको तन्त्र हुनुपर्ने हो । संघीय लोकतन्त्र नामको यो पद्धति पार्टीका ठूला साना, मझ्यौला भतुवाहरुलाई पाल्ने पद्धति पो रहेछ । यो पद्धति कुनै पनि हालतमा देश र जनता सुहाउँदो छैन । अवको निकास भनेको राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र नै हो । अचम्म जंगबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुक ऐनलाई बिस्थापन गर्न ल्याइएको देवानी, फौजदारी संहितासमेत जनताले पचाउन सकेनन् । डाक्टर, पत्रकार, महिला, व्यवसायी कोही खुशी हुन नसक्ने संहिता कस्तो होला ? सबका सब बिरोधमा, सबका सब डरलाग्दो भन्न थालेपछि ओली सरकारको संहिता जंगबहादुरको भन्दा पनि अलोकप्रिय भयो । सरकार एकपाइला पछि हटेर भनेको छ– मिलेर समस्या समाधान गरौं । निरंकूशताको योभन्दा हद अरु के हुन्छ ?
सत्य के हो भने अव मुलुक यसरी चल्दैन । कुनै पनिशक्तिलाई निषेध गरेर मुलुक अघि बढ्दैन यो कुरा राम्ररी बुझौं, सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई उचित सम्मान दिएर एउटा निश्चित राष्ट्रिय नीतिले नबाँधिकन यस्तो फुक्काफाल तरिकाले यो पद्धति चल्दैन, पद्धति फेल होला, देश फेल भयो भने के गर्ने ? नेपालीत्वको जगेर्नाका लागि समेत जनताको यो आक्रोश अर्को आन्दोलन हुनैपर्छ । अहिले जे भइरहेको छ, एउटा सानो नेकपा तप्का खुशहाल छ, बाँकी सिंगो मुलुक र मुलुकवासी यो व्यवस्थाप्रति घृणा गर्न थालिसकेका छन् । पद्धति उत्तम होला, नेकपाको शैली अधिनायकवादी नै देखियो । यसकारण राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको बिकल्प छैन ।